Vondrona Afrikana - Wikipedia
Ny Vondrona Afrika(ni)na (VA) dia fikambanana firenena afrikanina voaforona tamin'ny 2002 tany Durban any Afrika Atsimo, araka ny fanambarana tany Syrte tamin'ny 9 Septambra 1999. Nandimby ny Firafitry ny Firaisana Afrikana ny vondrona afrikanina. Ny fametrahana ny andrim-panjakana (antenimiera panafrikana sy ny fivorian'ny fandriampahalemana sy ny fiarovana) dia nitranga tamin'ny Jolay 2003 tamin'ny fivoriana tany Maputo tany Mozambika.
Tahaka ny tanjon'ny Vondrona Eoropeanina, ny tanjony dia mitazona ny firenena mpikambana ho demokratika, ny zon'olombelona ary ny fivoarana ao Afrika, indrindra amin'ny alalan'ny fampiasam-bola avy any ivelany amin'ny alalàn'ny NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Io tetikasa io dia nilaza fa ny fandriampahalemana sy ny demôkrasia dia zavatra tsy azo avela ho an'ny fivoarana maharitra.
Ankehitriny, ny vondrona Afrikanina dia miisa mpikambana 55 (afats'i Maroka, niala tao amin'ny vondrona afrikanina noho ny Sahara Andrefana niditra tao amin'io fikambanana io). Ny firenena efatra voahanton'ny vondrona Afrikanina dia Niger, Maoritania, Madagasikara ary ny Ginea ; fadian' ny lalampanorenan'ny Vondrona Afrikanina ny maka ny fahefana amin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana.
Ny teny ampiasaina ao amin'ny vondrona Afrikanina dia teny rehetra avy ao Afrika. Fa ny tena miasa indrindra dia ny teny anglisy, arabo, frantsay, espaniola, portogey ary ny teny soahily.
((ar))((en))((fr))((pt))Sehatra ofisialin'ny Vondrona Afrikana Archived Mey 26, 2008 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vondrona_Afrikana&oldid=1038240"
Voaova farany tamin'ny 29 Septambra 2021 amin'ny 00:02 ity pejy ity.